Immune System – Healthy Life Journal
အအေးမိဝေဒနာနှင့် တုပ်ကွေးမဖြစ်အောင် ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေရန် မှီဝဲသင့်သည်များ
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အအေးမိဗိုင်းရပ်စ်၊ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်တွေက ကိုယ်ခံအားကောင်းနေရင် တိုက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ခံအားကောင်းနေဖို့ ဘယ်လိုအာဟာရဓာတ်တွေကို မှီဝဲသင့်သလဲဆိုတာ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကာရိုတီးနွိုက် မုန်လာဥနီ၊ ကိုက်လန်၊ မက်မွန်သီး၊ သရက်သီး၊ သင်္ဘောသီးတို့လို ကာရိုတီးနွိုက်ပါတဲ့ အစားအစာတွေက ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်ချိန်မှာ...
ဘဝမှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဦးနှောက်၊ စိတ်ဓာတ်၊ ဘဝတက်လမ်း၊ အသည်းနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေမှာ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကောင်းမွန်စွာ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ဦးနှောက်ကို အားဖြည့်ပါ သီချင်းတိုးတိုးလေး နားထောင်ရင်း ဦးနှောက်ရဲ့ဖိစီးမှု ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပိုင်းကို ဖြေလျှော့ပေးပါ။ အေးငြိမ့်နေတဲ့ သံစဉ်ဟာ နားမှတဆင့်...
အခြေခံရောဂါရှိသူတို့အတွက် ကိုယ်ခံအားမြင့်တက်စေမည့် စားသောက်နည်း
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ဒီလိုအချိန်မှာ အခြေခံရောဂါဝေဒနာရှိသူတွေ၊ အထူးသဖြင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ဘေလုံးထုတ်ထားတဲ့သူ၊ ကင်ဆာကုနေသူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအား မြင့်တက်နေအောင် ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို အဓိက စားသင့်ပါသလဲ။ A. ဒီလိုအချိန်မှာ အခြေခံရောဂါဝေဒနာရှိသူတွေအနေနဲ့...
ကိုယ်ခံအားစနစ် မြင့်တက်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးခုခံနိုင်စွမ်းရှိအောင်
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျဆင်းရတာက အကြောင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ (၁) ရောဂါကြောင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျဆင်းတာနဲ့ (၂) အလုပ်များပြီး အစာကောင်းကောင်းမစား၊ အနားမယူတာကြောင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျတာဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ နံပါတ်တစ်အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ ရောဂါကြောင့် ကိုယ်ခံအားစနစ် ကျဆင်းတယ်ဆိုရင်တော့...
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကလေးကစပြီး ဘိုးဘိုးဘွားဘွားအထိ တစ်မိသားစုလုံး ကိုယ်ခံအားစနစ် ကောင်းမွန်စေဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ (၁) အစားအသောက်များ အာဟာရသိပ်သည်းမှုများတဲ့ ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ ထောပတ်သီးနဲ့ ဘလူးဘယ်ရီသီးတို့လို အစားအသောက်တွေက ကိုယ်ခံအားမြင့်တက်စေပါတယ်။ (၂) ဗီတာမင်ဒီ နေခြည်နုနုနဲ့...
၊ မီမိုးမေ ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုယ်ခံအားဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်လာတဲ့ အဆိပ်အတောက်၊ ဘက်တီးရီးယားပိုး၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၊ ဖန်းဂတ်စ်ပိုး၊ ကပ်ပါးပိုး စတာတွေကို တွန်းလှန်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားကောင်းနေသူတွေက အအေးမိဝေဒနာနဲ့ ချောင်းဆိုးတာတွေ မဖြစ်စေရုံသာမက အဆုတ်ပိုးဝင်တာ၊ ကျောက်ကပ်ပိုးဝင်တာ စတာတွေကိုပါ...
ကိုယ်ခံအားစနစ်တက်အောင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ . . .
မေး။ ။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျတဲ့သူတွေက ဖျားနာလွယ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ခံအားစနစ်တက်အောင် ဘာလုပ် သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ မဝါဝါ၊ ဘုရင့်နောင်။ ပါမောက္ခဦးကိုကို (အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ ကိုယ်ခံအားစနစ် ကျဆင်းတာက နှစ်မျိုးရှိတယ်။ ရောဂါကြောင့် ကိုယ်ခံအားစနစ် ကျဆင်းတာနဲ့ အ လုပ်များပြီး...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) အဓိကကတော့ ကိုယ်ခံအားတက်မယ့် အစားအသောက်တွေကို စားပေးဖို့လိုတယ်။ ဗီတာမင်စီ များတဲ့ အစာတွေနဲ့ အမိုင်နိုပပ်တိုက်ပါတဲ့ အစာတွေက ကိုယ်ခံအားကောင်းစေပါတယ်။ (၁) စွပ်ပြုတ် စွပ်ပြုတ်အနေနဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ်ကလည်း ပရိုတင်းပါလို့ ကိုယ်ခံအားတက်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုလောလောဆယ် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါကို...